Ngidala kanjani ama-backlink for website ngaphandle kokukhokhelwa?
Uma ufuna ukwakha i-backlink for website kunokuba uthole ngokushesha abanye bakhokhelwayo - mhlawumbe usuvele uthathe isinqumo esenziwe kahle. Masibhekane nakho - ukufaka isicelo sokuxhumanisa isixhumanisi ngezinye izikhathi kubonakala sengathi kuwumzamo othembisayo kakhulu. Kodwa-ke, empeleni, ukuthi kunezithuba eziphakeme kakhulu zokwenza umonakalo omkhulu kwinqubekela phambili yakho yamanje, kunokuba uzuze kunoma yikuphi ukuphakama okulinganiselwe nokuhlala njalo emgwaqweni, ama-CTR, ukuguqulwa, njll.Into yukuthi manje i-Google igcizelela ukunikeza imiklamo yokwakha imiklamo yekhwalithi kanye nemvelo. Kusho ukuthi ukwakha i-backlinks ye-website ngendlela efanele kuzodingeka ukuthi utshale isikhathi nome umzamo ukuheha kuphela amakhasi webwebhu afanelekayo wewebhu kanye namabhulogi. Yebo, umqondo wanamuhla wekhwalithi kanye nokwakha izixhumanisi eziphilayo akuyona elula futhi elula njengokujwayelekile, isibonelo, eminyakeni emibili noma emithathu eyedlule. Lezi zikhathi ezinhle zakudala zase zidlulile isikhathi eside.
Namuhla, ungakwazi ukudala ngempumelelo ama-backlink for website kuphela lapho usebenzisa izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo ezifanele, ngokuhambisana nokugcina uhlelo olubanzi lwe-SEO ibuyekezwa njalo futhi ihlelwe ngemuva kwayo. Kodwa akusekho isidingo sokukhathazeka - lapha kuza izindlela ezimbalwa zokusebenzisa-ezitholwayo zokuthola izixhumanisi zekhwalithi. Konke okudingayo lapha ukutshala isikhathi kanye nomzamo - ngenxa yokuthi awuyena omunye walabo abangekho okuhle-ngezandla abantu - futhi iphrofayli yakho yokuxhumanisa yakhiwe kahle. Ngenkathi ezinye zezinyathelo ezilandelayo zingase zithathwe ngaphezu kwemizuzu embalwa ukuze ube nakho konke okukhona, amandla abo amakhulu okuthuthukisa i-SEO yakho akufanele neze ihlelwe phansi. Ngakho-ke, ngezansi kukhona ezinye zezindlela zami ezivelele zokudala ama-backlink for website - ngokwemvelo, ngokuphumelelayo nangaphandle ngaphandle kokukhokha imali.
Thola Okuqukethwe Okuqukethwe Okuletha Ukubaluleka
Ngokusobala, ukuheha izivakashi eziningi ezibukhoma ngolwazi oluyingqayizivele, lwekhwalithi nolwazi mahhala nge-value yangempela cishe indlela engcono kakhulu yokudala i-backlinks yewebhusayithi ngokomzimba, futhi ngaphandle kokunye ingozi yokuthola inhlawulo yesimo. Konke okudingayo ukuhlinzeka kokuqukethwe kwekhasi eliphoqelekile (izihloko eziqinile, izifundo zamacala, njll. ) ukwenza abantu abaningi bahlanganyele, baxhumane nayo, futhi bakhulume kwenye indawo kwiWebhu. Ngaleyo ndlela, cabanga ngokuphindaphinda ingxenye yemibhalo yakho yombhalo ocacile ibe yinto engacacile futhi eyebheka amehlo, njenge-infographics ewusizo, amaspredishithi, amacwaningo amancane, amashadi, njll.
Yenza Okukhulu Kokuncintisana
Awukho okungahambi kahle ngokuhlola izincintiswano zakho ze-niche ngezikhathi ezithile ngokufunda kabanzi mayelana nokuhlangenwe nakho kwabo okuphumelelayo kusixhumanisi ukwakha ukwenza kahle imizamo yakho eminye ngendlela engcono kakhulu. Unganqikazi ukuzama ukusebenzisa elinye lamathuluzi atholakalayo e-intanethi ngokucwaninga kwe-backlink nokuhlaziywa okutholakala ekufinyeleleni okuvulekile. Kepha mina, ngathola ukuthi izinhlaka ezilandelayo ziwusizo kakhulu ukuthola ukuqonda okunamandla okuncintisana - i-Open Site Explorer yakwa-Moz (i-Moz), i-Semalt Analyzer (Semalt), i-Screaming Frog SEO Spider. Konke kungasebenza kahle lapho. Cabanga nje ngalezo zindlela ezivele zihloliwe ukuya kwi-PageRank ephezulu kakhulu nemithombo yokugunyaza ukudala ama-backlink for website noma ibhulogi eyakho.
Ukuba nomqukethwe oqinile ukukhiqiza ukulandelana kwekhwalithi yekhwalithi ngokwemvelo nokusebenzisa abadlali bakho be-niche ukuze baphinde baphinde bazuze izinzuzo zabo ezingcono kakhulu - kuzoba kuhle kodwa okwamanje akunamandla. Ngaleyo ndlela, qiniseka ukuthi uqhubeke usebenza kanzima hhayi kuphela ekwakheni ama-backlink ngokwabo, kodwa ngenxa yegunya lakho elinamandla nokuqwashisa umphakathi. Cabanga ngokuxoxa nabagqugquzeli abaphezulu embonini yakho, ukuheha izithameli ezibanzi kwi-Social Media ethandwayo, ukwandisa ubuciko bakho obuhle ngokuthumela okuthunyelwe kwebhulogi nezihloko, kanye nokunikeza imibono ehlakaniphile neqondakalayo ukuze ujabulele lezo zinkinga zangemuva ezifanelekile Source .